प्रधानमन्त्री कपः आज दुई खेल, को–कोबीच हुँदैछ भिडन्त ? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रधानमन्त्री कपः आज दुई खेल, को–कोबीच हुँदैछ भिडन्त ?
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी तेस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज दुई खेल हुँदै छन् । पहिलो खेल कीर्तिपुर स्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा सशस्त्र प्रहरी बल क्लब (एपीएफ) र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच हुँदैछ । खेल बिहान ९ः१५ बजेदेखि शुरु हुँदैछ ।
एपीएफमा पृथु बाँस्कोटा र सुदूरपश्चिममा शेर मल्ल कप्तान छन् । यस्तै, आजै हुने दोस्रो खेलमा प्रदेश ३ र प्रदेश ५ खेल्दै छन् । यी दुई टोलीबीचको खेल पनि बिहान ९ः१५ बजेदेखि मुलपानी क्रिकेट मैदानमा शुरु हुँदैछ । प्रदेश ३ लाई पारस खड्का र प्रदेश ५ लाई कृष्ण कार्कीले नेतृत्व गरेका छन् ।